Iva Shamwari yaMwari Nokusingaperi!
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Baoule Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Douala Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Indonesian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Malagasy Mapudungun Mauritian Creole Mbunda Mizo Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Nahuatl (Guerrero) Ndebele (Zimbabwe) Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Rutoro Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tahitian Thai Tongan Totonac Tsonga Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Zvinoda kuvavarira kuti uite shamwari; zvinodawo kuvavarira kuti urambe une shamwari. Kuvavarira kwako kwokuva uye kuramba uri shamwari yaMwari kuchakomborerwa zvikuru. Jesu akati kune vakatenda kwaari: “Chokwadi chichakusunungurai.” (Johani 8:32) Izvozvi zvinorevei?
Unogona kuva norusununguko zvino. Unogona kusununguka padzidziso dzenhema uye makuhwa akaparadzirwa naSatani. Unogona kusununguka pakusava netariro kwakazara muupenyu hwemamiriyoni evanhu vasingazivi Jehovha. (VaRoma 8:22) Shamwari dzaMwari dzakasununguka kunyange pa“kutya rufu.”—VaHebheru 2:14, 15.
Unogona kuva norusununguko munyika itsva yaMwari. Rusununguko rwunoshamisa zvakadini rwaunogona kuva narwo munguva yemberi! MuParadhiso yapasi, kunenge kusisina hondo, kurwara, uye utsotsi. Kusisina urombo nenzara. Kusisina ukweguru nerufu. Kusisina kutya, kudzvinyirirwa, uye kusaruramisira. Bhaibheri rinoti nezvaMwari: “Munotadzanura ruoko rwenyu ndokugutisa zvipenyu zvose.”—Pisarema 145:16.
Shamwari dzaMwari dzichararama nokusingaperi. Upenyu husingaperi chipo chinokosha icho Mwari achapa kune vose vanotsvaka kuva noushamwari naye. (VaRoma 6:23) Chimbofunga kuti upenyu husingaperi hucharevei kwauri!
Uchava nenguva yokuita zvinhu zvakawanda. Pamwe uchada kudzidzira kuridza chiridzwa chemumhanzi. Kana kuti pamwe unoda kudzidzira kunyora mifananidzo kana kuva muvezi. Ungada kudzidza nezvemhuka kana kuti zvinomera. Kana kuti pamwe uchada kufamba uchiona nzvimbo dzakasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana. Kuva noupenyu husingaperi kuchaita kuti zvinhu zvose izvozvi zvigoneke!
Uchava nenguva yokuita shamwari dzakawanda. Kurarama nokusingaperi kuchaita kuti uzive vamwe vakawanda vakava shamwari dzaMwari. Uchasvika pakuziva zvipo zvavo uye unhu hwavo hwakanaka, uye vachavawo shamwari dzako. Uchavada, uye vachakuda. (1 VaKorinde 13:8) Kuva noupenyu husingaperi kuchakupa nguva yokuti uve shamwari yomunhu wose panyika! Zvakanaka kupfuura zvose, ushamwari hwako naJehovha hucharamba huchisimba chaizvo nokupfuura kunenge kuchiita mazana emakore. Ivawo shamwari yaMwari nokusingaperi!
Shoko raMwari rinokurudzira kuwadzana kwechiKristu. Dzidza kuti ungabatsirwa sei nokuwadzana kwakadai.